ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: စိတ်ရှုပ်တဲ့အခါ
တော်ပြီး ခဏဖတ်တဲ့သူတွေပါ စိတ်ညစ်ကုန်အုံးမယ်း)
... ဒါမှ မွန်သံ+ကရင်သံ အစစ်ဟ...။း)
ဟဲ့ကောင်လေး ဘာလို့ နေပူထဲ
ငါတော့ ခုတလော စိတ်ရှုပ်လာရင် အစားပဲစားနေတယ်..
စိတ်ညစ်ရင် ဆံပင်ညှပ် ဆံပင်ဆိုး .. လျှောက်လုပ်ပစ်တာပဲ :D
တခါတလေ အဲဒိလို စိတ်ပေါ့ပါးအောင်လုပ်တာ ကောင်းတယ်...
ဆံပင်အရောင်ဆိုးတာ အခု သိပ်မကြိုက်တော့လို့ အနက်စိုစိုလေးဖြစ်အောင် ပြန်ဆိုးထားတယ်...
ဆေးပြန်ဆိုးဖြစ်ရင်တောင် ပါးပါးပြေပြေလေးဆိုးမယ် စိတ်ကူးတယ်...
နားဖောက်တာလဲ အားပေးတယ်၊ ကျနော်လဲ ဖောက်ထားလို့...:P
မြှောက်ပေးတာ... carry on, bro!
ဟဲ့ အဲဒါ တူနေပါလား မျောက်မြိုးရေ....အမလည်း စိတ်ရှူပ်ရင် ခေါင်းလျှော် ဆံပင်ညှပ် ဆိုင်မှာ သွားလုပ်တတ်တယ်။ မိတ်ကပ်လူး နှုတ်ခမ်းရဲရဲ ဆိုးပြီး အိမ်ထဲမှာတင် မှန်တကြည့်ကြည့် လုပ်တတ်သေးတယ်။ အပြင်တော့ မထွက်ရဲဘူး၊ တခါတလေ ပျော်တယ်ဟ အဲလို လုပ်ပစ်ရတာ...
အမယ် . .ဒီလိုခပ်မိုက်မိုက်ကြည့်တော့ လည်း
ညီမလေးအကိုက . . ဟိန်းဝေယံနဲ့ တူသလိုလို . .
ခိခိ . . ။